Bridge Muvaki: Vakafa Vanomuka vanosvika kuLinux | Linux Vakapindwa muropa
Mugadziri weBridge: Vakafa Vachimuka
Mbudzi 19 izuva iro zita remutambo wevhidhiyo richaburitswa Mugadziri weBridge: Vakafa Vanofamba. Zvakare, chinhu chakanaka ndechekuti ichave ichiwanikwa kune GNU / Linux. Iri rinonakidza kwazvo bhiridha rekuvaka zita rinoshandisa chiitiko chevateveri veakakurumbira akateedzana Kufamba Vakafa
Kunyangwe hazvo chokwadi chekuti zombie genre iri kushandiswa zvakanyanya, ichiri mufashoni. Sezvo zvakateedzana izvi zvaionekwa pachiratidziri, vagadziri vazhinji vakatora mukana wezita ravo rekugadzira mitambo yemavhidhiyo zvichibva pairi. Uye ikozvino unofanirwa kunongedzera iyi imwe kune mutengo we € 9,99 uye izvo zviripo izvozvi pa pre-kutenga pamavhidhiyo emitambo mapuratifomu akadai se Steam (ikozvino yaderedzwa -10%) uye GOG.
Mugadziri weBridge: Vakafamba Vanofamba vari kuuya 19 of noviembre yemapuratifomu akasiyana siyana, kusanganisira yepamutemo Linux rutsigiro, sezvandataura. Saka haizove imwe yemazita ekuremekedza atinofanira kumirira kuitira kuti tigone kuagarira, kana kuenda kuProton.
Musoro wakanangana nenyika yekunyepedzera Kufamba Vakafa kwakaziviswa panguva Gamescom 2020, yekutanga yeBridge Construtor Portal iyo yakaburitswa mu2017 uye izvo zvainakidza chaizvo. Ndiri kureva, ivo vari kugadzirisa zita iri kuti rikwane nyaya dzakasiyana siyana, ino nguva neakateedzana ne zombie.
Izvo hazvichinje chero chinhu mumutambo wayo, iwe uchazokwanisa kuvaka mabhiriji uye uchafanirwa kuramba uchishanda nefizikiki, asi panguva ino uchafanirwa gadzira misungo uye isa zvipingaidzos yeiyo isina kufa. Nakidzwa nekuvaka mumutambo uyu unosanganisawo zvimwe zvekupona nevamwe veaunofarira mavara kubva kuThe Walking Dead ...
Chokwadi ndechekuti kuvaka zambuko Iyo mhando inoshandiswa zvakanyanya, uye vane vateereri vavo, asi nekubata uku kwekunyepedzera vanoita kuti iwedzere kutaridzika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Mugadziri weBridge: Vakafa Vachimuka
YouTube-DL inodzokera kuGitHub, iyo ichatsigira nevagadziri
Dzidziso dzisina musoro dzekuputswa kwekodzero